खाडीमा रहेका नेपालीले ७५ लाखको ६ सय अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल पठाउने ,आइतबारसम्म आइपुग्ने - Nepali in Australia
May 13, 2021 autherLeaveaComment on खाडीमा रहेका नेपालीले ७५ लाखको ६ सय अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल पठाउने ,आइतबारसम्म आइपुग्ने
२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपालको को’भिड महामारीमा सघाउन मध्यपूर्वी मुलुकमा रहेका नेपालीहरुले ६ सय थान अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गरेका छन् । प्रतिसिलिण्डर ४० लिटर अक्सिजन अट्ने ६ सय थान सिलिण्डर खरिद प्रक्रिया सकिएको ओमानस्थित गैरआवासीय नेपाली सोसल क्लव (एनआरएन) का अध्यक्ष विकल झाले बताए ।
खाडी मुलुकका सबै नेपालीको स्वतस्फूर्त आर्थिक सहयोग हुनेगरी सिलिण्डर खरिद सकिएको र आइतबारसम्म नेपाल पठाउनेगरी तयारी गरिरहेको झाले जानकारी दिए । ‘६ सय थान अक्सि’जन सि’लिण्डर खरिद भइसकेको छ, जतिसक्दो छिटो नेपाल पाठाउने गरी हामी अहिले लजि’स्टिकको पार्टमा काम गर्दै छौं,’ झाले ओमानबाट भने । अक्सिजन सिलिण्डर नेपाल पठाउनका लागि मस्कटस्थित दूतावाससँग समन्वय गरिरहेको पनि उनले बताए । ढिलोमा आइतबारसम्म सिलिण्डर नेपाल पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको उनले सुनाए ।
अक्सिजन अभावमा जनताले मृ’त्युवरण गरेका समाचारले खाडीमा रहेका नेपाली चिन्तत भएको र स्वतस्फूर्त रुपमा सहयोगका अपिलहरु सुरु भएको पनि उनले बताए ।
कहिले खुल्छ उडान ? कहिले फर्कन पाउलान स्वदेश फर्कन ठीक्क परेका नेपाली ! यस्तो आयो जानकारी